दार्जिलिंगमा जन्मेकी नायिकाको प्रेमीले उडाए संजय दत्तकी श्रीमती, महिमा चौधरीले गरिन् अचानक विवाह !
Homeमनोरञ्जनदार्जिलिंगमा जन्मेकी नायिकाको प्रेमीले उडाए संजय दत्तकी श्रीमती, महिमा चौधरीले गरिन् अचानक विवाह !
१३ सेप्टेम्बर १९७३ का दार्जिलिंगमा जन्मेकी महिमा चौधरीको वास्तविक नाम रितु चौधरी हो। केहि ३ महिना अघि उनि ४७ औँ बर्ष प्रबेश गरेकी महिमाले सन् १९९७ मा रिलीज भएको फिल्म ‘परदेश’ बाट बलिउड डेब्यू गरिन। फिल्ममा उनिसँग शाहरुख खान थिए। फिल्म अघि महिमाले आमिर खानसँग कोला ब्रान्डको विज्ञापनमा काम गरेकी थिइन् जसको चर्चा व्यापक भएको थियो । ‘परदेश’ बक्स अफिसमा सुपर हिट भयो तर उनको करियर भने निश्चित उचाइमा पुग्न सकेन। बलिउडमा थोरै समयमा चर्चा पाउने अभिनेत्रीको नाममा महिमा चौधरीको नाम आउछ । जो पहिलो फिल्मबाटै राता रात सफल भइन् ।
महिमा चौधरी अफयरको बारेमा पनि धेरै चर्चा हुने गरेको छ । महिमाको नाम भारतीय टेनिस खेलाडी लिएन्डर पेससँग जोडिएको थियो । उनी पेससँग करीव ५ बर्ष सम्बन्धमा थिइन तर यो सम्बन्ध अगाडि बढ्न सकेन र दुवै छुट्टिए। लिएन्डरसँग छुटिएपछि उनले एक अन्तर्वार्तामा अनौठो खुलासा गरेकी थिइन् उनले लिएन्डर पेस मानिस नभएको बताएकी थिइन् । ‘उनि एक राम्रो टेनिस खेलाडी हुन सक्छन् तर उनि एक असल मानव थिएनन् । उनले मलाई धोका दिए ।’
हेर्नुहोस् मंसिर ६ गते शनिबारको राशिफल